Harriet Tubman, muAfrica-America uye anorwira kodzero dzevanhukadzi - Afrikhepri Fondation
TENGA BHUKU KANA CHIVI
Chipiri, Gumiguru 27, 2020
Harriet Tubman, mutsigiri wekodzero dzeAfrica America nevakadzi
0 / 5 Cherechedza: 4.75
Harriet Tubman ndiye anonyanya kuzivikanwa we Underground Railroad "makondakita". Mumakore gumi akaita nzendo gumi nembiri muSouth uye akaperekedza vanopfuura mazana matatu varanda kuenda kurusununguko, akananga kuFree States kana Canada. Uye, sekudada kwaakamboita nongedzo kuna Frederick Douglass, mukati mekufamba kwake kwese haana kumbobvira arasikirwa nemunhu mumwe chete "haana kumborasa munhu mumwe chete".
Mwana wake achiri muduku
Harriet Tubman akazvarwa ari muranda muDorchester County, Maryland kuma1820, kwevabereki varanda, madzitateguru ake aive erudzi rweAfrica, zita rake rekuzvarwa ndiAraminta Ross. Akararama hudiki hwake achiri mudiki nambuya vake vaive vakura zvekutadza kushanda. Paaive nemakore mashanu kana matanhatu, mudzidzisi wake Edward Brodas akamukweretesa kune vaviri vaviri kwaaishanda achisona, aigara achirohwa. Kwapera chinguva akange achiteya zviteyeso zvemakonzo. Akadzingwa basa, aimbove mushandi wepamba uye muchengeti wemwana. Sezvo zvaive tsika paminda, paakange aine makore gumi nerimwe, akatanga kupfeka bhendi rakatsvukuruka kuratidza kuti anga asisiri mwana. Paaive nemakore gumi nemaviri, akatora zita raamai vake, Harriet. Saka akatumirwa kunoshanda muminda. Akanga achiri achiri kuyaruka paakakuvara izvo zvaizomutevera kwehupenyu hwake hwese. Foromani muchena akatsamwa akamurova mumusoro nekuda kwekuramba kumubatsira kumisa murume aiedza kutiza.
Kuma 1844 akaroora akasununguka muAfrica American anonzi John Tubman uyo asina kugoverana hope dzake. Kubva zvaari muranda, aiziva kuti paizove nemukana wekuti atengeswe uye imba yake yaive dambudziko. Harriet akarota zvekufamba kuchamhembe. Ikoko aigona kuve akasununguka uye aisazofanira kunetseka nezvekurambana kunoitwa netsika dzakachengeterwa varanda. Asi John aisada kuti aende kuchamhembe. Akati aive akanaka kwaaive uye akange asina chikonzero chekuenda kuchamhembe. Uye John aisada kuti aende kuchamhembe. Akatyisidzira kumutuka kuna tenzi wake. Asi achiteerera chete kudiwa kwake kwerusununguko, akasiya murume wake ndokutizira kuPhiladelphia.
Muna 1849, vachitya kutengeswa, pamwe nevamwe varanda pamunda, Harriet Tubman akafunga kutiza. Akaenda husiku humwe netsoka. Nerubatsiro rwehukama rwemukadzi chena, akawana imba yake yekutanga munzira yekuenda kurusununguko. Pamba pekutanga akatora mota, yakavanzwa pasi pehombodo, munzira yekunotevera kwaaienda. Akawana vanhu vakanaka zvekumunongedzera kunzvimbo dzekuenda kunomubatsira paakayambuka Mason-Dixon Line (muganho uripakati peFree States neSlave States). Akabva arovera nemukadzi nemurume wake vachipfuura. Vakanga vari abolitionists uye vakamutora kuenda kuFiladelphia. Ikoko akawana basa ndokuchengetedza mari yake kubatsira vamwe varanda. Ikoko akasangana naWilliam Zvakadaro (1821-1902) aive mumwe weanopa simba zvine simba mu Underground Railroad.
Sill aive akasununguka akazvarwa mutema muPennsylvania aigona kuverenga nekunyora. Akashandisa matarenda ake kubvunzurudza varanda mukufamba uye kunyora mazita avo uye nyaya mubhuku. Achiri kuburitsa bhuku rake muna 1872 pasi pezita rekuti: "Underground Railroad" maanorondedzera kuyedza kwaHarriet Tubman. Ichiri kuburitswa nanhasi.
Muna 1850, nerubatsiro rwaW. Kunyange zvakadaro, akabatsira varanda vake vekutanga kuti vatizire kuchamhembe. Akatumira meseji kumwanakomana mukuru wehanzvadzi yake achivaudza kuti vatore chikepe chehove kuCambridge. Igwa iri raizovatora kuenda kuChesapeake Bay uko Harriet yakanga yakavamirira kuBodkin Popint. Ipapo Harriet akavatungamira kuenda kuPhiladelphia.
Kubudirira kwake mukuuya kwake kwaive kwakanyanya nekuda kwehungwaru hwake hukuru, huchenjeri, hushingi uye hutsinye, hwaakaisa mukushandira kwezvirongwa zvakanyatsosimba zvekufambisa kwake. Akavimba nenharaunda yakasviba yakasviba kuti ibatsire kudzosa mhuri yake neshamwari panguva zhinji dzemamishinari kuMadganis. Akange akangwarira kuti asasangane nevanosangana navo padyo neminda yavakatiza kubva: akavatumira mameseji, kuti vagosangana naye munzvimbo yakavanda. Akanga achinyatsoziva zvakavanzika. Pane imwe nguva akatora chenjedzo yekutora huku mbiri naye. Zvakaitika kuti akanzwa munjodzi, apo paakapotsa asangana chiso nechiso neaimbova tenzi wake. Akabva aregedza huku dziya, ndokutanga kumhanya achidzokera kumashure kuti dzibate. Izvi zvakashamisa tenzi, uyo asina kumbobvira aziva kuti akavhima huku muvhimi aive, zvirokwazvo, aive mbavha yevaranda.
Pane imwe nguva pachiteshi chechitima, akacherekedza kuti vavhimi vevaranda vakapunyuka vaive vakatarisa zvitima zvaienda kuchamhembe, vachitarisira kumubata iye nemhosva yake. Pasina kunonoka, akakwira boka rake muchitima chaienda kumaodzanyemba, achibudirira kubheja kuti vaimutevera vaisambofungidzira chokwadi chekuti angangonyura munzvimbo yemuvengi; gare gare akatangazve nzira yakarongwa, kubva kunzvimbo yakachengeteka.
Pamusoro peiyo, aive nedzidziso yakasimba yokuti, apo chero muranda aigona kuramba njodzi yekuenda kuchamhembe, ani zvake akasarudza kuenda kuchamhembe asi aizotendeuka pakati payo anofanira kupfurwa, saka dzivisa kuti mumakwikwi anotengesa boka racho. Nemafaro, zvinoratidzika kuti haana kumbobvira asvika kune zvakanyanyisa zvakadaro.
Upenyu mushure meAmerica Civil War
Mushure mehondo, Harriet Tubman akazove murwiri wekodzero dzevanhu vemuAmerica nevakadzi. Akashanda kunyanya kusimudzira chikonzero chevakadzi suffrage. Kune mukadzi muchena uyo akamubvunza kana achitenda kuti vakadzi vanofanirwa kuvhota, akapindura kuti "atambura zvakakwana kuzvitenda" 50. Tubman akatanga kupinda misangano yemasangano anokwikwidza, asati anyoresa pamwe nevakadzi vakaita saSusan B. Anthony naEmily Howland. Akaenda kuNew York, Boston neWashington kunopinda misangano inosimudzira vakadzi suffrage. Nharo yake yaive nechinangwa chekuratidza kuti vakadzi vanokodzera kuwana kodzero dzezvematongerwo enyika kuburikidza nezviito zvavo. Akaenzanisira pfungwa yake nekutsanangura chiito chake panguva uye mushure meHondo Yenyika uye akaonesa kuzvipira kwevakadzi vasingaverengeke vakamboshandira nyika yeAmerica;
Ndinokutendai Sarah Bradford, uyo aiva nhoroondo yezvinyorwa uye akanyora nyaya dzake, akaona nyaya yehupenyu hwake yakabudiswa mu1869 pasi pezvinyorwa Zviratidzo zveHupenyu neHarriet Tubman (Zvikamu muHupenyu hwaHarriet Tubman).
Akanyoreswa pa National Vakadzi Horo yeMukurumbira.
Harriet Tubman: The Biography (Chirungu Chinyorwa)
1 nyowani kubva ku € 2,99
Tenga € 2,99
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Gumiguru 26, 2020 7:38 PM
chikamu VAFARIDZI VAFRICA
Nhema murume - Nhetembo naBrigitte Winbi
Bahá'í Kutenda uye Nheyo yeRudzi Rwakabatana
Dzokera kuAfrican calendar
Categories Sarudza chikamu Kuti ibudiswe AFRIKHEPRI-TV KUVA NOKUSHA EBOOKS LIBRARY ugari AFRICAN CUISINE MHURI WEVADZIDZI VEMBA ENTERTAINMENT Documentary VANA ENVIRONMENT URANDA ZVIMWE ZVAKAITIKA BUSINESS FACTS VAFARIDZI VAFRICA MAMVIDHIYO ACHARAMBA NHOROONDO YAKANAKA NOKUTANGA AFRICAN INITIATIONS Registration / LOGIN BLACK INVENTORS AND SAVENTS KINDLE THE VOICE OF KAMA bhukusitoo LIVE TV BHUKU ROKOTENGA AUDIO BOOK Bhuku rePDF VHITSI YEMAHARA MUSIC NEWS, NEWS PARADIGM KAMIT KAMITE KUTI VANHU VAKAFUNA AFRICAN AND SAGES Uzivi & PSYCHOLOGY Philosophy uye Psychology Health and Medicine PLAYLIST nhetembo PSYCHART Therapy UMAMBO HWE AFRIKA UTENYU NEMISANGANO SAYENYERI NEMISSTERI SHOPPING UZIMWE NEZVAKRISTU SPORT TEXTS OF MATTHIEU GROBLI URGENT / NEWS VIDEOS Web-TV